Ciidamada Dowlada Soomaaliya & Ehlusuna oo la wareegay garbaaharey – SBC
Ciidamada Dowlada Soomaaliya & Ehlusuna oo la wareegay garbaaharey
Garbahareey- Wararka laga Helayo Degmada Garbaarey ee Xarunta Gobolka Gedo ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan Dowlada Soomaaliya & Ehlusuna waljameeca ay gacanta ku dhigeen Magaaladaasi oo ay horey u joogeen Ciidamada taabacsan Xarakada Alshabaab.
Ciidamada Ahlusuna iyo kuwa Dowlada KMG ah ayaa ku ruqaansaday magaalada Garbahaarey inta aysan ka bixin ciidamadii xarakada Alshabaab ee halkaasi ku sugnaa, waxaana la xaqiijiyay daqiiqado ka dib in Magaaladaas iyo deegaano ku heeranba ay guud ahaan gacanta ku dhigeen ciidamada DMKG ah iyo kuwa Ahlusuna.
Ciidamadan DKMG ah ee gaaray Garbahaarey ayaa waxa ahorkacaya gudoomiyihii hore ee isbaheysiga Dooxada Juba Bare Aadan Shire Hiiraale, waxaana Bare Hiiraale oo saxaafada kala hadashay arinkaasna uu sheegay in uu ku wajahanyahay isaga iyo ciidankiisaba Magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada hoose.
Dhinaca kale dhaq dhaqaaqyo ciidan iyo isku abaabul dagaal ayaa laga soo sheegayaa magaalada Baardheere oo ay gaareen ciidamadii xarakada Alshabaab ee isaga baxay Garbahaareey, waxaana laga cabsi qabaa in dagaalo isku rogaal celis ah uu saacadaha soosoda dhaco.
La wareegida Ciidamada Dowlada ayaa Imaaneysa Xilli maalintii Shalay uu Deegaanka Tuulo Barwaqo oo 20 Km u jirta Garbahaarey uu ka dhacay Dagala Khasaare Geystay uu ku dhexmaray Ciidamada Dowlada & Ehlusuna waljameeca oo dhinac & Xarakada Alshabaab.